Xundubey: Mudaaharaad hub wata oo dad hubeysan wataan sideedaba lama ogolaan karo… – Hagaag.com
Xundubey: Mudaaharaad hub wata oo dad hubeysan wataan sideedaba lama ogolaan karo…
Dowladda ayaa ku andacoonaysa inay sidaa u samanayso sidii ay uga hortagi lahayd faafitaanka cudurka COVID-19 oo todobaadyadii la soo dhaafay ku soo laba kacleeyay dalka.
Wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa sheegay in dowladda aysan inaba aqbaleynin in banaanbax lagu qabto Muqdisho arrimo ay kamid yihiin amniga iyo cudurka Corona dartood.
“Mudaaharaad hub wata oo dad hubeysan wataan sideeba lama ogolaan karo haddii ay dhaceyso arrintaas qiimeyn kale iyo cudurka oo naga yaraado iyo dhibaatada oo yaraato iyo arrinta amni oo yaraato qiimeyn kale bey ku imaan kartaa go’anku waa sidiisii.”
“Cidii sameysana haddey iyada is xilqaantay ma ahe, dowladda uma dirin mana ogola gaar ahaan magaalada caasimadda ah wey kasii duwan tahay gobollada, caasimadda waxaa joogo mas’uuliyiinta dhammeyd, waxaa joogo dowladdii waxaa joogo safaaradihii hubka ugu badan baa yaalla” ayuu yiri wasiir Xasan Xundubey oo la hadlayay warbaahinta dowladda.
Cabdikariim Xuseen Guuleed oo ka tirsan Midowga Musharraxiinta ayaa BBC u sheegay in bannaanbax uu yahay xaq dastuuri ah isla markaana uu go’aankooda weli sidii yahay oo ay Jimcaha qaban doonaan banaanbaxa.
Arrintan ayaa imaaneysaa xilli Midowga Murashaxiinta xilka Madaxweynaha Soomaaliya ay ku baaqeen isu soo baxyo cusub maalinta Jimcaha ee bishan ay ku began tahay 26 kadib markii laga hor istaagay dibadbaxyadii ay dhigayeen Jimcihii la soo dhaafay.
Dowladda ayaa horey u sheegtay in la joojiyay dhamaan isu imaatinnada sababo la xiriira sidii loo xakamayn lahaa cudurka Covid-19.
Midowga Murashaxiinta waxa kaloo ay dhaliil u jeediyeen wakiillada beesha caalamka oo ay ku sheegeen inay doonayaan inaanay waxba laga soo qaadin shaqaaqooyinkii Muqdisho ka dhacay 19 kii bishan.